विजय देवरकोण्डाले बलिउडमा पाउलान् त सफलता ? – Pahilo Page
विजय देवरकोण्डाले बलिउडमा पाउलान् त सफलता ?
११ भाद्र २०७८, शुक्रबार १५:४५ 83 पटक हेरिएको
काठमाडौं । सन् २०११ मा साउथ इन्डियन फिल्मनगरीमा उदाएका स्टार हुन्, विजय देवरकोण्डा । डेब्यु फिल्ममा त्यति धेरै चर्चा नभए पनि उनले डेब्युको पाँच वर्षपछि ‘पेल्ली छोपुलु’ मार्फत दर्शकको मन जिते । त्यसपछि उनको हातमा आयो ‘अर्जुन रेड्डी’ । त्यसपछि त उनले करियरको बारेमा सोच्नै परेन। उनलाई एकपछि अर्को फिल्म अफर हुन थाल्यो । उनी स्टार बने भन्दा फरक नपर्ला । यो फिल्मको हिन्दीसँगै साउथमै अन्य भाषामा समेत रिमेक भइसकेको छ ।
केही समय अगाडि ‘डियर कमरेड’ को बलिउड रिमेकमा देखिन गरेको करण जोहरको अफरलाई नकारेका विजय अन्ततः हिन्दी भाषाको फिल्ममा आएका छन् । उनको यो दसौ फिल्म भने हिन्दीमै निमाण हुनेछ । फिल्मलाई बलिउडको तर्फबाट करणले नै निर्माण गर्नेछन् । पुरी जगन्नाथको निर्माण तथा निर्देशन रहने फिल्मको शीर्षक ‘लाइगर’ राखिएको छ । फिल्ममा राम्या कृष्ण र रोनित रोयको पनि अभिनय रहनेछ । निर्देशक पुरीको ३७ औ फिल्म रहेको यसमा विजयको एक्सन अवतारलाई दर्शकले देख्न पाउनेछन् ।
अर्जुन रेड्डीसँगै गीता गोविन्दम पनि विजयको ब्लकबष्टर फिल्म हो । यिनै फिल्ममार्फत उनले बलिउडमा पनि राम्रै फ्यान बनाउन सफल भएका छन् । आफ्नो साउथको फिल्महरुमार्फत बलिउडका दर्शकहरुको समेत मन जितेका विजयले बलिउडकै फिल्म मार्फत त्यो क्रेज बढाउँछन् या घटाउँछन् ? यो भने आउँदो दिनले नै बताउनेछ । यद्यपि उनलाई हिन्दी भाषामा सुन्न बलिउडका फ्यान पक्कै उत्साहित छन् ।